Ukukhetha izicathulo ezihle kakhulu zasebusika
Ukukhetha izicathulo zaseburhulumenteni ezipholileyo kunye nekhwalithi ngumsebenzi weNombolo 1 yowesifazane ngokuhlwa kwexesha lokubanda. Ingxaki ebalulekileyo kukuba ukhethe kuphela ukhululekile kodwa kunye nezicathulo ezifake imfashini, apho unako ukuhlala ungenakunyaniseki kwaye uzive ukhululekile nakwiqhwa. Ukwazi oku, uphawu lwe "Econika" lulungiselele ukuqokelela kwebusika kwezicathulo zabasetyhini, ukudibanisa induduzo kunye neendlela zakutshanje.
Iibhola, izitya okanye izitya ezisebusweni?
Kwiziqokelelo zekwindla-ebusika abaqulunqi bezakhele izibhatshi zendalo kwindlela yomkhosi, ama-sneakers, ama-sneakers ebusika kunye noboya, amabhuthi aphezulu kwisiqonga. Kukho inketho ezininzi, kodwa ngubani na ongayimisa?
Abaqhubi okanye, njengoko bebizwa nangokuthi, i-maranth - sneakers kwi-wedge efihlakeleyo, umkhonto ohamba phambili kwixesha eliqela. Zidibanisa ngokufanelekileyo izicathulo zezemidlalo kunye nobabalo lwezicathulo zesetyhini. Iimodeli ezithandwa kakhulu kulo nyaka ziza kufudumala izibhenqo zesikhumba zemibala eyahlukileyo: ukusuka kwimizekelo yeetoni ezimnyama ezimnyama ezigcinwe kwiimpawu ezimnandi ze-shades zegolide.
Izibhinqo zasebusika - olunye uhlobo olukhethiweyo kumxholo wesicathulo samabhinqa azinzileyo kunye nabasetyhini. Eyona nto iya kuba yimifanekiso yesikhumba kunye nokugqitywa koboya bemvelo. Uhlobo oluphambili phakathi kweetyunithi kunye ne-Snyerses-Maranths yinto yecala elilodwa, eli lixesha elinokuba liphezulu kwaye likhulu. Olunye ugugu olubalulekileyo: kwintsebenziswano engaqhelekanga kunye nezicwangciso zombala. Ngokukodwa kubantombazana abakhutheleyo abathanda induduzo kunye nemibala eqaqambileyo, abaqulunqi be-"Econika" banikezela izitya ze-burgundy ze-stylish kunye nokufakwa kwezikhumba ezinamabala kunye nezicathulo ezigciniweyo - zikhululekile kwaye ziyi-stylish ngexesha elifanayo.
Iibhothi zamabhinqa kwindlela yokulwa nemikhosi yemikhosi - kwakhona phakathi kweenqwelomoya zezicathulo ezinokuzikhethela zexesha elizayo lebusika. Iimodeli ezisezantsi, kunye neebhothi kwisithende esiphezulu ziya kubonwa. Inzuzo ephambili "izihlangu" zemigangatho yokhuseleko. Kwizihlangu ezinjalo zasebusika ezineqonga lokunceda, akukho nekhefu okanye i-ice cover. Imodeli ekhululekile kakhulu eqoqweni lasebusika esuka kwi "Econika". Ngokomzekelo, abalandeli befriji ye-grunge baya kujonga iibhotile ezinobunqunu ezenziwe ngesikhumba sangempela kwiRIAROSA.
Yintoni enxiba ngayo izitya kunye nama-sneakers ebusika?
Xa ukhetha isihlangu esifudumele ngokufudumele kufuneka ucinge ngokubaluleka komzekelo, kodwa kunye nokuhambelana kwazo nezinye izinto ezivela kwisigcino sakho sasebusika. Kule nkalo, inketho enkulu yendalo yonke iya kubakho i-sneakers. Zidibene ngempumelelo kunye nazo zonke izitayela zangaphandle. Ngokomzekelo, elula kodwa ngexesha elifanayo imodeli ephathekayo kwisitayela esingaqhelekanga sinokudalwa ngokudibanisa ijeyiti ephosiweyo kunye nabakhwela abamnyama abano-ALLA PUGACHOVA. Izitya zokugcoba zegolide ezidibeneyo kunye neengubo zoboya okanye iingubo zoboya ziza kubonakala zihlambulukile, zingabonakali kwaye zihle. Kwaye kwingubo ephoqelekileyo yengubo yesikhumba kunye nama-sneakers, uya kujonga ngendlela epholileyo.
Ngentambo enkulu yokugqithisa, ibhokethi ibhokethi, ipaki okanye ibhatyi ephantsi, inwele yoboya ihlanganiswe kakuhle. Banokukunceda ukudala umfanekiso ongaqhelekanga odibeneyo kunye neengubo eziqhelekileyo eziphakathi. Iibhothi zamabhinqa zamabhinqa azixhomekekanga, ngoko ke zifanelekile ukuba zimbethe idayi kunye neengubo.
Indlela yokukhetha izicathulo ezifanelekileyo
Umlando wezakhiwo zembatho
Imfashini yekhulu lemashumi mabini
5 abahlaziyileyo bezobuhle
Umdlali womdlali osebenzayo uRosa Syabitova
Ukususela kuDana Borisova umyeni ubalekele kunye ne "Mercedes"
Ikhefu elenziwe ekhaya
Impahla yefashoni ekwindla-ebusika 2009-2010